Kachasị mma eReaders na ahịa | Akụkọ akụrụngwa
Dijitalụ ọgụgụ nwere ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-eso ụzọ yana agbanyeghị na ọtụtụ ndị ọrụ na-aga n'ihu na-ekwusi ike na-ekwupụta na enwere ike ịgụ akwụkwọ na usoro dijitalụ na mbadamba, eReaders bụ ngwaọrụ zuru oke iji nwee ụdị akwụkwọ a. Ngwaọrụ ndị a agbanweela nke ukwuu n'oge na-adịbeghị anya ma taa, ha na-enye anyị ahụmịhe ọgụgụ na-enweghị atụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na anyị niile na-echefu oge ụfọdụ akwụkwọ akwụkwọ.
E nwere ọtụtụ akwụkwọ ntanetị dị iche iche n'ahịa taa, nke dị iche iche dị iche iche yana yana ọtụtụ atụmatụ na nkọwa dị iche iche. Otú ọ dị, taa, anyị ekpebiela ịdebe 5 nke ngwaọrụ kachasị mma nke ụdị a, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịtụ anya na m ghagha ụgha na aha nke isiokwu a na nke ahụ bụ ngwaọrụ 6 anyị ga-enyocha ugbu a, yabụ Jikere ma jide pensụl na mpempe akwụkwọ iji detuo ihe niile.
1 Obi iru ala
3 Mkpado Lux 2016
4 Gbasara akwukwo Paperwhite
5 Kobo Aura H2O na isi Kindle
O doro anya na Amazon bụ otu n'ime nnukwu ntụnye aka na ahịa akwụkwọ kọmputa na Obi iru ala bụ nnukwu ọkọlọtọ ya. Ọ bụ ezie na ọ dịlarịrị n'ahịa maka obere ihe karịrị otu afọ, ma ka anyị na-eche maka ụdị nke abụọ nke ngwaọrụ a na asịrị na-egosi na enwere ike igosi ya na mbido 2016, nke a bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu eReaders. dị ike ma na-atọ ụtọ anyị nwere ike inweta, ọ bụ ezie na ọnụahịa ya dị oke elu maka akpa ọ bụla.
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwapụta nke a Kindle Voyage nke si Amazon;
Akụkụ: 16,2 cm x 11,5 cm x 0,76 cm
Na njirimara nke njirimara na nkọwapụta nke a Ọdịdị njem a, obi abụọ adịghị ya na anyị nọ n'ihu otu n'ime akwụkwọ elektrọnik kachasị mma na ahịa. N’isiokwu a ị ga - ahụ nyocha anyị mere maka akwụkwọ elektrọnik a. na ị pụrụ ịzụta ya site Amazon na njikọ ọzọ n'ihi na a ọnụahịa nke 189,99 euro.
Ikekwe Kobo eReaders amachaghị ọtụtụ ndị ọrụ, mana ogo na arụmọrụ ha enweghị mgbagha. Ihe omuma atu nke a bu Kobo Glo HD, nke ọtụtụ oge tụnyere Amazon Kindle Voyage, na-apụta dị ka onye mmeri n'enweghị nnukwu nsogbu. N'ezie, enwere ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ngwaọrụ Amazon, n'agbanyeghị eziokwu ahụ ọnụahịa ya dị elu karịa.
Na-elekwasị anya na Kobo Glo HD, anyị na-ekwu maka ngwaọrụ dị ka ọtụtụ nwere ihuenyo 6-anụ ọhịa, yana teknụzụ Car-E-ink na nke nwere mkpebi dị oke mma nke 300 pikselụ kwa inch, na-enye anyị ohere ịgụ na nke kachasị mma na nke kachasị mma.
Ndị isi atụmatụ nke Kobo Glo HD a Ha bụ ndị a:
Akụkụ: 157 x 115 x 9.2 mm
Ibu: gram 180, otu ihe ahụ dị ka Kindle Voyage na ọtụtụ ngwaọrụ na ahịa
6-anụ ọhịa ihuenyo mmetụ na HD mkpebi na incorporating E-ink technology nke 1448 x 1072 pikselụ. Mkpebi nke pikselụ kwa inch na-agbago 300
Na-akwado ọtụtụ ụdị eBook na ahịa, ọ bụ ezie na ọ naghị ekwe ka akwụkwọ ọdịyo ma ọ bụ egwu
Gwọ nke a Kobo Glo HD sitere na 129,76 euro ọ bụ ezie na ọ bụ ihe kachasị mma ịchọta onyinye nke ahụ na-enyere anyị aka inweta ngwaọrụ a maka ọnụ ala.
Mkpado Lux 2016
Otu n'ime nnukwu ederede dị na ahịa ọgụgụ dijitalụ bụ Tagus, nke na-enye anyị oge dị iche iche ngwaọrụ ndị na-emeziwanye ruo mgbe ha ruru ọhụrụ Tagus Lux 2016, eReader nke na-etinye ihuenyo Carta ọhụrụ, nke E-ink mepụtara na nke na-enyekwa anyị nkọwa ndị ọzọ na-atọ ụtọ, na mgbakwunye na nhazi nlezianya na ọnụ ala dị ala.
Ọ bụrụ na anyị kwesịrị ịkọwa ihe gbasara ngwaọrụ a, na mgbakwunye na ihuenyo ya, ọ bụ ịdị ọkụ ya, ọsọ ya mgbe, dịka ọmụmaatụ, ịtụgharị peeji nke akwụkwọ ọ bụla ma ọ bụ Android 4.4.2 sistemụ nrụọrụ na-agba ọsọ n'ime na nke ahụ na-enye anyị ohere iji ụfọdụ ngwa, ndị arụnyere, dịka ihe nchọgharị weebụ, njikwa email ma ọ bụ Twitter n'onwe ya.
Ọzọ, anyị ga-enyocha isi njirimara na nkọwa nke 2016 Tagus Lux a;
Nwere ihuenyo mmetụ e-ink na EPD 6? Ọgbọ ọzọ HD E-ink na-enweghị ntụgharị uche. Ọ na-agụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro eBook niile gụnyere .epub na .mobi.
Akụkụ: 170mm (elu) x 117mm (obosara) x 8,7mm (ọkpụrụkpụ)
Arọ: gram 180
Next-amụba ntighari-free 6-anụ ọhịa E-ink HD ngosi na mkpebi nke 758 x 1.024 pikselụ na 212 pikselụ kwa inch
Ekwe omume nke ịnụ ụtọ dị iche iche formats, gụnyere .epub na .mobi
Sistem arụmọrụ 4.4.2
Su ọnụahịa bụ euro 119,90 na i nwere ike ịzụta a 2016 Tagus Lux site Amazon na njikọ ọzọ.
Njem njem ahụ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na amaokwu amaokwu Amazon, mana ụlọ ọrụ nke Jeff Bezos duziri nwere ngwaọrụ ọzọ dị na ahịa, nke dị oke mma na ike, yana ọnụahịa dịtụ ala. Anyị na-ekwu okwu, dịka ị maara n'ezie, gbasara Gbasara akwukwo Paperwhite na-ọkọnọ dị ka oké nhọrọ na-enwe eBooks, maka a ọnụahịa nke 129,99 euro.
Anyị nwere ike ịsị na Paperwhite bụ nzọụkwụ n'azụ njem, na ọkwa niile, mana ọ nweghị ihe ọ bụla ga-enwe anyaụfụ akwụkwọ elektrọnik ndị ọzọ dị n'ahịa dịnụ yana ụfọdụ anyị ga-ahụ n'isiokwu a.
na Kindle Paperwhite Key Atụmatụ na nkọwa ndị a;
Ngosipụta nke anụ ọhịa 6 na teknụzụ e-akwụkwọ akwụkwọ ozi na ọkụ agụ ọkụ, 300 dpi, teknụzụ kachasị mma, yana akpịrịkpa isi awọ 16
Akụkụ: 16,9 cm x 11,7 cm x 0,91 cm
Ebe nchekwa dị n'ime: 4GB
Formatsdị akwadoro: Nhazi 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI na-enweghị nchebe, PRC nwaafọ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP site na ntughari gunyere
Akwụkwọ Bookerly, nanị Amazon ma mee ya ka ọ dịrị mfe ma dịkwa mfe ọgụgụ
Nsonye nke ọrụ mmịfe peeji nke Kindle nke ga-enye ndị ọrụ ohere ịtụgharị site na akwụkwọ site na ibe, wụfee site n'isi ruo isi ma ọ bụ ọbụna wụtuo na njedebe nke akwụkwọ ahụ n'agaghị ebe ọgụgụ
Nsonye nke smart search na a zuru ezu integrated ọkọwa okwu na ama Wikipedia
Kobo Aura H2O na isi Kindle
Iji mechie ndepụta a anyị enwebeghị ike iguzogide gụnyere ngwaọrụ ole na ole anyị chere na anyị enweghị ike ịpụ na n'etiti nke ọ na-agaghị ekwe anyị omume ịhọrọ. Offọdụ n'ime unu ga-ekwu nke ahụ n'ihi na anyị atụghị ndepụta nke ngwaọrụ 6, mana anyị nwere mmasị ịme ka ndụ anyị sie ike ma anyị kpebiri ịmepụta otu n'ime ndị na-agụ akwụkwọ 5 nwere nhọrọ abụọ dị iche iche ma ọ bụrụ na anyị enweghị mmasị na nke ọ bụla. Ngwaọrụ 4 anyị enyochagoro.
El Kobo Aura H2O na Ihe Ndabere Ha bụ akwụkwọ elektrọnik abụọ anyị họọrọ iji mechie ndepụta ahụ maka ebumnuche abụọ dị mfe. Ngwa Kobo na-enye anyị a 6,8-anụ ọhịa ahụ na ihuenyo, dịtụ ibu karịa ihe anyị na-ahụ na ọtụtụ ngwaọrụ na ahịa. O nwekwara ike ime ka ọ dị mmiri na ọbụna mikpuo ya, na-eme ka ọ bụrụ ihe zuru oke eReader iji jiri bat ahụ ma ọ bụ gụọ na ọdọ mmiri.
Maka akụkụ ya ihe bụ isi Kindle bụ otu n'ime akwụkwọ elektrọnik dị ọnụ ala na ahịa, ma ụfọdụ nwere ihe karịrị atụmatụ na nkọwa na-adọrọ mmasị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezigbo eReader maka ndị niile na-amalite ụwa nke ịgụ dijitalụ ma ọ bụ ndị ga-ejikọta akwụkwọ ọgụgụ akwụkwọ na eBooks na ọnụahịa ya anaghị eru 80 euro. O nwekwara ike ibu eReader zuru oke maka ndị ọrụ ahụ niile ga - ejikọ ịgụ ọgụgụ nke akwụkwọ dijitalụ na akwụkwọ n'ụdị ọdịnala ọdịnala, na nke a bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ ebe ọ bụ na ịgụ dijitalụ ka agụghị akwụkwọ. taa.
Họrọ onye na-agụ akwụkwọ kacha mma abụghị ọrụ dị mfe. Ọtụtụ ihe na-abata ma na njedebe enwere akụkụ dị oke mkpa, ọ bụ ya mere anyị ji enwe mmasị na echiche ndị ọzọ ma anyị na-akwado ka ị gụọ ihe kacha mma ebook maka ndị ọrụ ibe anyị si Todo eReaders
Gịnị mere eReader ji kpebie ihe niile anyị gosiri gị?. Gwa anyi na oghere edere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ mee nke a site na otu netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Ndị a bụ 5 nke kacha mma eReaders na ahịa
Aghọtaghị m ihe mechara.
Kedu ihe gosipụtara difference 60 ọdịiche dị n'etiti Glo HD na njem ahụ? Ihuenyo ahụ bụ otu, katalọgụ izugbe bụ otu ihe ahụ ma Kobo na-agụ epub (nke na-abụghị ikpe na Kindle).
Biko nyere m aka ịghọta nke ahụ na anaghị m azụta ihe ọ bụla (n'ihi na echeghị m na blog a bụ nkwado Amazon!).
Kdị ahụ dị ọnụ karịa n'ihi na ị na-akwụ ụgwọ maka akara ahụ.